firmware, အစဉ်မပြတ်အိပ်မက်ဆိုး | Linux မှ
ဒိုင်ယာဇီပန် | | GNU / Linux များ, အခြား
လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကဒီနေရာမှာမရေးခင် Frannoe ရဲ့ဘလော့ဂ်မှာစာရေးဆရာတစ်ယောက်အဖြစ်အရောင်းအဝယ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါလုပ်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုခေါ်ခဲ့တယ် "Firmware, ပွဲ ဦး ထွက်ရဲ့အိပ်မက်ဆိုး"။ ယခုဒုတိယအခန်းကိုရေးရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
ငါအစီအစဉ်၏သတင်းကိုမကြာသေးမီကဖတ်ပါ စတီဖာနို Zacchiroli (Debian စီမံကိန်းခေါင်းဆောင်) နောက်ဆုံးတော့ဒါ အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှအကြံပြုဖြန့်ဝေများ၏စာရင်းအကြားတစ်ကမ္ဘာလုံးဖြန့်ဝေ (မြောက်ဘက်ကို Trisquel၊ Blax, gNewSense, Venenux, Musix နှင့် Dynebolic စသည့်မြောက်များသောဖြန့်ဝေမှုများနှင့်အတူ)။ အမှန်မှာ၊ သင်သည်မည်သည့်ဆက်စပ်အတွေးအခေါ်အကြောင်းမဆိုစတင်နိုင်သည့်စာပို့စနစ်ကိုဖွင့်ထားသည်။ ပြောစရာမလိုပါ, ပွတ်တိုက်မှုစတင်ခဲ့ပြီး: FSFists သည်အခမဲ့မဟုတ်သော repositories ကိုအဆုံးသတ်ချင်သည်၊ Debianites ကဤသည်မှာ Debian စာချုပ်ကိုချိုးဖောက်သည်ဟုဆိုသည်
ငါ Debian သည်အဓိကသိုလှောင်ခန်းကိုသာသုံးလျှင်တောင် FSF မှအကြံပြုသောဖြန့်ဖြူးသူများစာရင်းတွင်ပါဝင်ရန်ထိုက်တန်သည်ဟုယူဆသူများအားဆန့်ကျင်ရန်မရည်ရွယ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တစ်စုံတစ်ရာကိုအလေးထားလိုပါသည်။ FSF ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှု debian ၎င်းသည်အထောက်အကူပြုခြင်းနှင့်အခမဲ့မဟုတ်သောသိုလှောင်ရုံများ၏ထိန်းသိမ်းခြင်းသာမကသာမက၊ ဤအဝင်ရောက်နိုင်သည့်နှင့်အတူလွယ်ကူခြင်း (sudo nano /etc/apt/sources.list လုပ်ရန်နှင့်လိုင်းတစ်ခုစီ၏အဆုံးမှာ contrib နှင့် free ကိုထပ်ပေါင်းခြင်းကဲ့သို့လွယ်ကူသည်။ ) ESA Debian မထည့်သွင်းရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ Squeeze နှင့်၎င်း၏အခမဲ့ kernel တို့နှင့်အတူသူတို့သည်အနည်းငယ်ပိုမိုနီးကပ်စွာရောက်ရှိလာသည်၊ သို့သော် FSF လိုလိုနီးကပ်လာသည်။
ဤအရာအားလုံး၏အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာကွန်ပြူတာအား“ ၁၀၀% အခမဲ့” ရရှိရန်နှောင့်နှေးစေသောအရာမဟုတ်သောအခမဲ့မဟုတ်သော Firmware နှင့်ပတ်သက်သည့်အခါဖြစ်လိမ့်မည်။ (RMS အရအခမဲ့)။ ဒါကအခမဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေး (သို့) ဂရပ်ဖစ်အရှိန်မြှင့်ခြင်းစတဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုအတွက်ကျွန်တစ်ယောက်အကြားဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်သင့်အားတွန်းအားပေးသည်။ OR ပင် Linux စတင်သို့မဟုတ်ထိုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းခံရလျှင်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဂရပ်ဖစ်အပလီကေးရှင်းများလည်ပတ်ရန်အတွက် Desktop များကိုသာအသုံးပြုသောကြောင့် Stallman သည်ဂရပ်ဖစ်အရှိန်မလိုအပ်ပါ (pdf သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ) ဒါပေမယ့်အချိန်အများစုမှာသူ console ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုလည်းမလိုအပ်ပါ။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုမရှိသောကြောင့်အီးမေးလ်များကိုဖတ်ရန်နှင့်ပို့ရန်သာဆက်သွယ်ပါသည်။ (နှင့် Emacs မှ)Ethernet ကေဘယ်ကြိုးနဲ့ချွေတာနိုင် BIOS မှာ Lemote ကသူ့ကိုကြည်လင်သောသြတ္တပ္ပစိတ်ဖြင့်စွန့်ခွာခဲ့သည်။ လိုအပ်ချက်များကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်သင်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာတက်နိုင်လိမ့်မည်မှာသေချာသည် maslow ၏ပိရမစ်.
ဒါပေမယ့်သေချာတာကတော့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမှာတူညီတဲ့လိုအပ်ချက်တွေမရှိဘူး။ ငါကံကောင်းထောက်မစွာဂရပ်ဖစ်အရှိန်မလိုအပ်ပါဘူး (ငါ conky ကျော်လွန်ပြီး, မျက်နှာပြင်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး)ကျွန်ုပ်အိမ်၌ကွန်ပျူတာ ၃ လုံးရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုဖြင့်အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည် (PC နှင့်မှတ်စုစာအုပ် ၂ ခု) နှင့် PC နှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည့် wifi router လည်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဆရာ ၀ န်များအပြင်“ အရေးပေါ်ကိစ္စများ” တွင်ဆက်သွယ်နိုင်မည့် Wi-Fi ဇုန်များရှိပါသည်။ ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးထက်မကမိုဘိုင်းဘရော့ဒ်ဘန်းနဲ့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရှက်စရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကကျွန်တော့်ရဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မိနစ်အနည်းငယ်တိုင်းဖြတ်တောက်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ BIOS အတွက်တော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကသူကကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့ operating system ကို load လုပ်လို့ပါ။
ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုလျစ်လျူရှုတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးစေခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟာ့ဒ်ဝဲကုမ္ပဏီတွေကဘာကြောင့်မောင်းနှင်ရတာလဲ GNU / Linux များ? ဒါပေမယ့်ပိုပြီးအရေးကြီးတယ် ၁၀၀% အခမဲ့ distros သုံးစွဲသူများသည်မည်မျှအရေးပါမှုရှိသနည်း။ အသုံးပြုသူများသည် တော လွတ်လပ်ခွင့်အရဆိုရင် ၁၀၀% အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲကိုပဲ ၀ ယ်ဖို့အကြံပေးတယ်။ သူတို့က linuxers ကဒ်ပြားတွေကိုသုံးပြီးရပ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတာသူတို့တော်တော်လေးယုံကြည်တယ် NVIDIAကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်း၏ယာဉ်မောင်းများကိုလွှတ်ပေးရန် မှလွဲ၍ အခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါ။ သို့သော် NVIDIA အတွက်အန္တရာယ်ရှိသည် (Adobe Flash ကိုသုံးသလိုလို) ထိုသူကိုတွေ့ရသည် GNU / Linux အတွက်မင်းရဲ့ယာဉ်မောင်းဗားရှင်းတွေကိုမလုပ်ပါနဲ့ Windows နှင့် Mac သုံးစွဲသူများအတွက်သာရည်ရွယ်သည် (၉၀% နှင့်အထက်)။ ဘယ်ဖြစ်နိုင်ခြေကအများဆုံးဖွယ်ရှိသည် NVIDIA မင်းရဲ့ယာဉ်မောင်းတွေကိုလွှတ်ပေးပါ GNU / Linux များ ဒါမှမဟုတ်ဝယ်လိုအားနိမ့်ကျရင်သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်မလား။ NVIDIA ကိုငါပြောတဲ့အတိုင်းငါဟာအခမဲ့မဟုတ်တဲ့ဒရိုင်ဘာတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုခုကိုပြောတယ်။
FSF နှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရန် Debian ကြိုးပမ်းမှုမှမည်သည့်အရာများရနိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ သို့သော်၎င်းနှစ်ခုအကြားနီးကပ်စွာတည်ရှိခြင်းကြောင့်သုံးစွဲသူများစွာသည် Debian မှထွက်ခွာသွားကြလိမ့်မည် ရုံ firmware ကိုပြforနာသည် (၎င်းတို့သည်အခြားစီးပွားဖြစ်ပရိုဂရမ်များမလိုအပ်ပါက)။ ဥရုဂွေးမှာဒီဟာ့ဒ်ဝဲကဈေးမကြီးဘူး၊ ရွေးချယ်စရာတွေသိပ်မများဘူး၊ ရောင်းသူတွေကယူဆတယ် မင်းကရှားတယ် software ၏စည်းကမ်းချက်များ၌။ ဟာ့ဒ်ဝဲ ၀ ယ်ယူရာတွင်မှားယွင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်သည် ၁၀၀% အခမဲ့ distroaတွင်အတွေ့အကြုံရှိစေသည် မခံနိုင်သော ပြီးတော့သင်အကူအညီတောင်းတဲ့အခါသူတို့ကသင့်ကိုပြောပြတယ် မင်းကို။ ရလဒ် - ပိုက်ဆံဖြုန်းတီးခြင်းနှင့် ၀ မ်းနည်းခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်းခံစားချက်……………………… ..သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာခိုးယူခံခဲ့ရလျှင်အဖြစ်.
FSF နှင့် Debian အကြားဆွေးနွေးရန်စာပို့ရန်စာရင်း။ http://lists.alioth.debian.org/pipermail/fsf-collab-discuss/
Stallman's Lemote အသုံးပြုမှု http://richard.stallman.usesthis.com/
PS: ငါ Sabayon Linux9ကိုသောကြာနေ့ကတည်းကအသုံးပြုနေတယ်။ ကျွန်တော့် broadcom 432b ဟာ LIVE DVD ပေါ်မှာအသိအမှတ်ပြုခံရတာကိုမအံ့သြခဲ့ဘူး။ Ubuntu နဲ့ဒီလိုမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ငါအခြားဖြန့်ဖြူးအသုံးပြုသည့်အခါအဘို့အရင်းမြစ်များမှ firmware ကိုဘယ်လို install လုပ်ဖို့ကိုငါသိ၏။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Firmware, အအိပ်မက်ဆိုးဆက်ပြောသည်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Debian "ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး" ကြိုးပမ်းမှုအကြောင်းကြားပြီးသူတို့က "အခမဲ့" မဟုတ်သောသိုလှောင်ရုံများနှင့်အရူးအမူးလုပ်လိမ့်မည်ဟုအနည်းငယ်ကြောက်ရွံ့ခဲ့သည်။
ဒီသဘောမျိုးနဲ့ပြောရရင် Debian ရဲ့မူဝါဒဟာဘက်ကိုကျေနပ်လောက်အောင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ထက်ပိုတယ်လို့ငါထင်တယ်။ ၁၀၀% အခမဲ့ဖြန့်ဖြူးလိုသူများအတွက်၊ ၎င်းတွင်ရှိသည့်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်၊ Wi-Fi ကဒ်သို့မဟုတ်အခြားအရာများပြုလုပ်ရန်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုလိုလား / လိုသူမည်သူမဆို၊ ၎င်းတွင်ရှိသည့်အရာ၊ စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲသာမက၎င်းကိုဖယ်ထုတ်မထားပါက၎င်းသည်အတော်အတန် "ကြားနေ" အနေအထားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လူတိုင်းသည်ထိုသိုလှောင်ရုံကိုအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သည် (မ) သည်။
"FSF Approved" tag ကိုရဖို့အတွက် contrib နဲ့ free non-repositories တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဟာကျွန်တော့်အတွက်အမှားတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ Debian နဲ့အမြဲတမ်းလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ပြီးအတူတူပဲဆက်လုပ်သွားမှာပါလို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်။ တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ FSF ကသူတို့သတိထားလာလိမ့်မယ်၊ သူတို့ဟာသဘောတူညီချက်တစ်ခုရကြလိမ့်မယ် (ငရဲအေးခဲသွားပြီလားဒါမှမဟုတ်ဖားတွေဖလင်ကိုကခုန်ခြင်းစတင်ခဲ့ပြီဆိုတာမသေချာပေမယ့်)
ငါမြို့တော်၌ရစ်ချတ် Stallman ပေးသောညီလာခံ (Viedma, Rio Negro, Argentina)
ပြီးတော့ကောင်လေးကအစွန်းရောက်သူတစ်ယောက်ဆိုတာသတိထားမိတယ်။ ပြီးတော့အစွန်းရောက်တွေကအမြဲတမ်းမကောင်းဘူး။ အိမ်မှာ PC မှာအခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲဟာငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲတည်ရှိနိုင်တယ်။
အတိအကျ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်နှင့် ၁၀၀% သဘောတူသည် စံပြကမ္ဘာမှာစီးပွားဖြစ် firmware မရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်တကယ့်ကမ္ဘာမှာတော့ Stallman ကြည့်ဖို့ငြင်းဆန်ပုံရသည်၊ ငါကိုယ်တိုင် Chakra မှပေးသောနှစ်သိမ့်မှုကိုစွန့်လွှတ်ဖို့မရည်ရွယ်ဘဲ၊
လူတွေဟာဗျာဒိတ်ရူပါရုံမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်မစိုးရိမ်ပါတယ်။ လူကြီးလူကောင်း, ထိုအစွန်းရောက်အတွေးအခေါ်များ, သူတို့ရဲ့တည်ရှိမှုကိုကျေးဇူးတင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဤမျှလောက်များစွာသောစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးပွင့်လင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုရှိသည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဒီအစွန်းရောက်အတွေးအခေါ်များသည် HTML5 စံသတ်မှတ်ချက်ကဲ့သို့သောပရိုဂရမ်ဘာသာစကားများစွာကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာထားရှိခြင်းကိုသင်သဘောပေါက်ပြီလားမသိပါ။ ဒီအစွန်းရောက်အတွေးအခေါ်များအားလုံးအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအားလုံး၏အခြေခံဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်သာမန်အသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးအသုံးမ ၀ င်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအတွေးအခေါ်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်မျိုးစေ့ဖြစ်သည်။
ထိုသဘောမျိုးဖြင့်ပိုမိုလေးစားမှုရှိခြင်း၊ stallman နှင့်သူ၏အတွေးအခေါ်များကိုရိုးရှင်းသောအစွန်းရောက်များသို့မဟုတ်အစွန်းရောက်သမားများအဖြစ်အမှတ်တံဆိပ်မဖြစ်စေပါနှင့်။ သူပြောသည့်အတိုင်းအကြောင်းပြချက်များစွာရှိသော်လည်းပညာရေးနှင့်အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲများအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းကိုရပ်ကြည့်ပါ။ သူတို့ရဲ့အငြင်းပွားမှုများအတွက်ညာဘက်နှင့်အလေးချိန်မဟုတ်ပါဘူး။
nano အမှတ် +100 ရှိတယ်
အစွန်းရောက်ခြင်းဟူသည်ကြီးကျယ်သောအရာများကိုလုပ်ဆောင်သည့်နိယာမဖြစ်သည်။ တကယ်လို့များ "ကောင်းပြီ၊ ငါတို့ကဒီကိုဒီကနေမွေးစားလိုက်တာ" လို့ပြောရင်ငါတို့ဘယ်နေရာကိုမှသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ ဂန္ဒီသည်မိမိကိုယ်ကိုအခါအားလျော်စွာသူ၏မူများကိုချိုးဖောက်ရန်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး၏အခြေခံမူများကိုဆက်လက် ဦး စားပေးရန်စဉ်းစားနေသည်။ Stellman သည်အောင်မြင်မှုနှင့်အမှားအယွင်းများနှင့်အတူနည်းပညာအရပိုမိုလွတ်လပ်သောကမ္ဘာကြီးကိုရှာဖွေရာတွင်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္aboutကိုစဉ်းစားရန်ကြီးမားသော GNU / Linux အသိုင်းအဝိုင်းတွင်မျှော်လင့်ရသည်။
ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံမှ Stallman မည်သို့ဝေဖန်ခံခဲ့ရသည်ကိုတွေ့ရသောအခါကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်ဆိုးမိသည်။ သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအခြားတစ်ဖက်တွင်ဆက်လက်တည်ရှိပြီးလွတ်လပ်သောသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအတွက်လွတ်လပ်မှုနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအောင်မြင်မှုများရှိပါက၎င်းသည်လွတ်လပ်သောနည်းပညာများကိုအသုံးပြုခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ထိန်းညှိခြင်းတို့အားခွင့်ပြုသည့်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောအစွန်းရောက်စည်းမျဉ်းများချမှတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ Stallman ၏ရည်မှန်းချက်မှာသူအားဝေဖန်မှု၏နောက်တစ်ဘက်ဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ Nano ။
ကောင်းပြီ, TDE ။
အလွန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း nano "ဒါဟာလူတွေမှာဗျာဒိတ်ရူပါရုံမရှိဘူး။
သူကအစွန်းရောက်ဝါဒဒါမှမဟုတ်ရူးသွပ်တယ်လို့သူမထင်ပါဘူး ရစ်ချတ်၏စိတ်တွင် "အကန့်အသတ်မရှိ။ "
@Digital_CHE“ ကျွန်တော့်မြို့မှာ Richard Stallman ပေးတဲ့ညီလာခံမှာ (Viedma၊ Rio Negro, Argentina) ... » che Viedma သည်ပြည်နယ်၏မြို့တော်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံ၏မြို့တော်နီးပါးပါ။ သင် Maquinchao chelforo မှထွက်ခွာသွားသောမြို့ကိုပြောလျှင် mencos cervantes စသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ Viedma သည်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်သည် Viedma မှမဟုတ်ပါ) ။ အဆိုပါ oftopic များအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး။
fsf ရှိလူများသည် debian ကိုဆန့်ကျင်သောအခြေခံများအပေါ်မှားသည်။
စီးပွားဖြစ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏တည်ရှိမှုကိုငြင်းပယ်ပါ၊ သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းကိုတားဆီးပါ။ အာဏာရှင်ဆန်တယ် အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအသုံးပြုရန်ဘီးကိုတားဆီးရန်သို့မဟုတ်နေရာချထားရန်မကြိုးပမ်းသည့်အခါစီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲလ်ကုမ္ပဏီများသည်ကုမ္ပဏီများနှင့်တန်းတူသို့မဟုတ်ပိုဆိုးသည်။
ငါ FSF ပိတ်ပင်ထားမှုတားမြစ်ချက်ကိုပြောပြလိမ့်မယ်
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်စည်းကမ်းချက်များချမှတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲယုံကြည်ချက်အတွက်အကြောင်းပြချက်များကြောင့်လူတို့အားဆက်သွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။
Debian သည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏စိတ်ဓာတ်နှင့်အမှန်တကယ်ရှင်သန်ပြီးအမှန်တကယ်လွတ်လပ်သောဆော့ဝဲလ် operating system ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အသုံးပြုသူ၏ကိုယ်ပိုင်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းကိုတားဆီးခြင်းသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကအသုံးပြုသူနဲ့သာသက်ဆိုင်တယ်။
စန်တီယာဂို Caamano Hermida ဟုသူကပြောသည်
မည်သူမဆိုကိုမှားယွင်းစေခြင်းနှင့်«မစ္စတာ၏ထင်မြင်ချက်ကိုလေးစား၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုမရှိဘဲ Ricardo "အခမဲ့ပရိုဂရမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မသင့်ကွန်ပျူတာမှာသင်လိုချင်တာကိုအခမဲ့ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ ကျွန်ုပ်သည်စီးပွားဖြစ်ယာဉ်မောင်းသူများကိုဆန့်ကျင်။ ဘာမျှမဆိုင်ပါ။ Broadcom, Nvidia ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏နှာခေါင်းထဲမှထွက်လာသည့်အခါ၎င်းတို့ကိုသူတို့ဖြန့်ဝေရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအခွင့်အရေးရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
အကယ်၍ Debian အနေဖြင့် FSF တံဆိပ်ကိုချိတ်ဆွဲထားပါကအခြား distro တစ်ခုသို့သွားရန်လွယ်ကူသည်၊ ၎င်းကိုအသုံးပြုပါက၊ ဆုတံဆိပ်အပြင်အခြားသူများကိုသတင်းပို့မည့်သူသာလျှင်သုံးစွဲသူခွဲတမ်းဆုံးရှုံးမှုဖြစ်လိမ့်မည်။
Santiago Caamaño Hermida သို့ပြန်သွားပါ
အဓိကအချက်မှာ Stallman ကိုအစွန်းရောက်သမားတစ် ဦး အဖြစ်ရှုမြင်ကြပြီးသူလည်းဖြစ်သော်လည်း GPL ကဲ့သို့သောအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲတွင်ပစ္စည်းများစွာရှိသည်။
ဤနေရာတွင်ပြproblemနာမှာသင်သည်မည်သည့်စနစ်နှင့်မည်သည့်ဆော့ဝဲလ်ကိုသုံးရန်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော်လည်း၊ လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်သောကြောင့်သင်၏လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်သောကြောင့်လှောင်အိမ်ထဲ၌မိမိကိုယ်ကိုပိတ်ဆို့ရန်ရွေးချယ်ခြင်းအဆုံးသတ်သွားခြင်းကြောင့်လွတ်လပ်မှုကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ Linus Torvalds ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့သလို (သူသည်စတီးလ်မန်းထက်ပိုမိုခြောက်သွေ့ပြီးလက်တွေ့ကျသည်) ကမ္ဘာ၏အနာဂတ်သည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ လူတွေဟာသူတို့ရဲ့အရာတွေကို (ဆော့ (ဖ်) ဝဲနဲ့ဘာလုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိချင်လာတယ်၊ လူတွေဟာနေ့တိုင်းနည်းပညာနဲ့ပိုပတ်သက်လာကြတာကိုနားလည်လာကြတယ်) ဆော့ဗ်ဝဲသည်အင်ဂျင်နီယာများအတွက်သာမဟုတ်၊ နောက်ပိုင်းတွင်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက်သာဖြစ်သည့်ခေတ်ကာလတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာကိုလေ့လာသင်ကြားသူများသို့မဟုတ်ထိုစွမ်းရည်ဖြင့်မွေးဖွားလာသူများနှင့်များပြားလာသည်။ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တာမို့အမြတ်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတာမပြောသင့်ဘူး။
Nvidia Broadcom နှင့် Blah Blah တို့သည်သူတို့အခွင့်အရေးများတွင်ရှိပါသလား။ သင်၏ရွေးချယ်မှုသည်အမြဲကောင်းသည်။ ကောင်းပြီကောင်းပြီ၊ Nvidia ကိုပြောတာကသူတို့ရဲ့ယာဉ်မောင်းတွေကိုမလွှတ်ချင်တဲ့အတွက်တရုတ်အတွက် ၁၀ ပုံးအတွက်ကန ဦး စာချုပ်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာ၊ အဲဒီမှာသူတို့လွတ်လပ်စွာပိတ်ထားခွင့်ရလိုက်တယ်၊
Debian က ၁၀၀% အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲလို့မိမိကိုယ်ကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်မထောက်ခံပါဘူး။ ပထမ ဦး ဆုံးသူတို့မှာရှိပြီးသားသုံးစွဲသူများစွာကိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ MACs ဟောင်းများကိုပြန်လည်အသက်သွင်းရန်အခမဲ့မဟုတ်သော firmware ကိုအသုံးပြုသော၎င်းသည်၎င်းကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည် ဆာဗာများပေါ်တွင်နှင့်၎င်းရေရှည်တွင်၎င်းတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်စီးပွားဖြစ်ဘာမှမပါ ၀ င်သောကြောင့်၎င်းသည်သုံးစွဲသူ၏မလုပ်သင့်မရွေးရွေးချယ်မှုကိုပြုလုပ်သောကြောင့်အယူအဆ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင် ၁၀၀% အခမဲ့ဖြစ်သည်။ FSF ကိုအဲဒါကိုအတည်ပြုဖို့လိုတာငါမမြင်ဘူး။
ဒါက open source ဆော့ဖ်ဝဲကိုအခမဲ့ဆော့ဝဲလ်လှုပ်ရှားမှုမတိုင်မီမွေးဖွားလာခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ငါတို့မှာပိုပြီးသိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတစ်ခုရှိခဲ့မယ်၊ ဘယ်သူသိလဲ ... ဒါက xD ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်ခက်ခဲသည်
ကျွန်ုပ်သည် @Santiago နှင့်သဘောတူသော်လည်းအခမဲ့ distros များအတွက်တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားသင့်သည်ဟုယုံကြည်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲသူများအားအဆုံးသတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်ခြင်းမရှိသောကြောင့်အနာဂတ်တွင်၎င်းကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။ အရာအားလုံးကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိခြင်း (လွတ်လပ်မှု (၄) ခု၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်) အရေးကြီးသည်မှာဆက်လက်ရပ်တည်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုမှီခိုနေခြင်းဟုမထင်ပါ၊ အရာအားလုံးသည်အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်ကြိုးစားသူအားဟုတ်ပါသည်၊ တစ်ခုမှာ၎င်းကိုတောင်းဆိုရန်ဖြစ်သည်၊ နောက်တစ်ခုမှာလွတ်လပ်စွာကမ်းလှမ်းထားခြင်းမရှိသောကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုအလံလွှင့်ထူရန်ဖြစ်သည်။
Debian သည်အခမဲ့အစီအစဉ်များကိုသာအသုံးပြုရန် (သို့) အခမဲ့မဟုတ်သောအရာများကိုသာအသုံးပြုရန်ထို option ကိုဆက်လက်ပေးသင့်သည်။
အမှန်တရားကတော့ Debian လုပ်မိရင်ငါအရမ်းစိတ်ပျက်မိမှာပါ၊ distros အမြောက်အမြားကိုကြိုးစားပြီး၊ ကျွန်ုပ်နှင့်လုံးဝအဆင်ပြေသည်🙁
ကောင်းပြီဆိုလျှင် Fedora, Sabayon, Arch, Cjakra နယ်မြေများသို့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်းသည်ကျွမ်းကျင်လိမ့်မည်။
»ဒီဥရုဂွေးမှာရှိတဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲဟာဈေးမကြီးဘူး၊ ရွေးချယ်စရာတွေများလွန်းတယ်။ ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ပတ်သက်လာရင်သင်ကရှုပ်နေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဈေးရောင်းသူတွေကယူမှတ်တယ်။ ဟာ့ဒ်ဝဲ ၀ ယ်ယူရာတွင်မှားယွင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်သည် ၁၀၀% အခမဲ့ distro မခံနိုင်သောအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်။ သင်အကူအညီတောင်းသောအခါသူတို့သည်သင့်ကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်လှန်ရန်ပြောလိမ့်မည်။ »
အမှန်တရားကတော့ ၁၀၀% အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲပါတဲ့ကွန်ပျူတာကိုရှာရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်၊ မဖြစ်နိုင်သလောက်မဖြစ်နိုင်ပါကဤကဲ့သို့သောကွန်ပျူတာကိုရှာဖွေခြင်းသည်သာမန်ထက်ငွေကုန်ကြေးကျများနိုင်သည် (နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်) ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သာမာန်အသုံးပြုသူတစ် ဦး (လူမှုရေးဘဝ၊ ဝိုင်ဖိုင်မှတစ်ဆင့်အင်တာနက်ကိုဆက်သွယ်သူ၊ သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းရှိသူ) အတွက်အကြံပြုရမည့်အချက်မှာသင်အနည်းဆုံးကျေနပ်ဖွယ်အတွေ့အကြုံရှိလိုပါကတံခါးပိတ်အစိတ်အပိုင်းများပါသော GNU / Linux distro တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲ့ဒါကြောင့်သင်ထောင်ချခံရမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဘာမှပြုပြင်လို့မရဘူး၊ ဆန့်ကျင်ဖက်မှာအရာဝတ္ထုတွေအားလုံးကိုအခမဲ့ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေလုပ်နိုင်တယ်၊ တူညီသောအတွေးအခေါ်အတိုင်းလိုက်နာပြီးစနစ်ကိုသင်ထိန်းချုပ်ခွင့်ပြုသည်။
PS: Diazepan၊ ကျွန်ုပ်သည် Sabayon9ကိုလည်း၎င်း၏ KDE ဗားရှင်းတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းအတွက်အခြားပြောင်းလဲရန်မလိုအပ်ပါ။
1) သတ္တုတွင်း Xfce နှင့်အတူရှိ၏
၂) h-node တွင်၎င်းတို့သည် ၁၀၀% အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်နှင့်အလုပ်လုပ်သောမှတ်စုစာအုပ်များကိုစာရင်းပြုသည်။
ဝဘ်အတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤသို့သောအရာမျိုးရှိသင့်သည်ဟုထင်ခဲ့သော်လည်းတစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀% အခမဲ့ PC ကို ၀ ယ်လို။ ၎င်းမှကျွန်ုပ်အလိုရှိပါကယခုအထိကျွန်ုပ်မတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်အတွက်အကျိုးရှိပါလိမ့်မည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်။
ငါအပြည့်အဝလိုက်ဖက်တဲ့မော်ဒယ်များဟာအလွန်ဟောင်းနွမ်းကုန်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်ပုံစံအသစ်တွေဟာအပြည့်အဝကိုက်ညီမှုမရှိဘူးဆိုတာသတိပြုမိပေမဲ့ (ယေဘုယျအားဖြင့် wi-fi ကဒ်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊ အလွန်ဆင်းရဲတဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ။
linux နှင့် GNU tools များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုနောက်ဆုံးအသုံးပြုသူများအတွက် distro ၏ရှုထောင့်မှတိုင်းတာရန်အလွန်အမင်းခက်ခဲသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀% open source ၏အတွေးအခေါ်ကိုဝေမျှသည်။ ၎င်းသည်၎င်းကိုမည်သို့မွေးဖွားခဲ့သနည်း၊ တည်ရှိ။
ယခုအချို့စက်ပစ္စည်းများမှစီးပွားဖြစ်မောင်းနှင်သူများသည်ရှုပ်ထွေးသောပြisနာဖြစ်နေသည်။ သို့သော်သူ / မြန်မြန်ဆန်ဆန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းတွင်လမ်းလွဲရန် Linux / Gnu ကိုနေ့တိုင်းထုတ်ကုန်များစွာတွင်တွေ့ရသည်။
ယခုပိတ်ထားသော software နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအခြားခေါင်းစဉ်တစ်ခု topic ဖြစ်သည်
အပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာတစ်ခုခုနဲ့ Mr. Stallman ကိုကျွန်တော်အရမ်းလေးစားပါတယ်။ သူဝန်ခံသလိုမျိုးပဲသူကလုံးဝလွတ်လပ်တဲ့စနစ်တွေကိုအသုံးပြုဖို့အားပေးတဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကိုပေးတယ်။
ကျွန်ုပ်လုံးဝမမျှဝေသောအရာတစ်ခုမှာလူတို့၏ရွေးချယ်နိုင်စွမ်းသည်အကန့်အသတ်ရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲလ်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိစေရ၊ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမှကန့်သတ်ခြင်းမရှိပဲ၎င်း၏အရည်အသွေးနှင့်ထိရောက်မှုကြောင့်စီးပွားဖြစ်အပေါ်တွင်သာပျံ့နှံ့စေလိုသည်။
မှတ်ချက်များစွာတွင် "အစွန်းအစွန်းအားလုံးသည်မကောင်း" ဟူသောစကားစုကိုလူ့သမိုင်းကိုအနည်းငယ်ကြည့်ပါက၎င်းသည်ပိုမိုအဓိပ္ပာယ်ရှိပုံကိုမြင်ရလိမ့်မည်။
@ Tavo "Mr. Stallman ကသူဝန်ခံသည့်အတိုင်းနေထိုင်သည်"
ပထမ ဦး စွာငါအဘို့ငါ Stallman လိုအပ်ပေမယ့်ဥပမာအချို့သောမှတ်စုများကြောင်းရှင်းလင်း
- သူသည်ပြည်နယ်မှထောက်ပံ့မှုများကိုလက်ခံရရှိသည်၊ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းပြုလုပ်လိုသောမိမိကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းရှုတ်ချသည့်ထိုပြည်နယ်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
သူနှင့်အချို့သော purist gnu / linux အသုံးပြုသူများသည်သင်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုသာအခမဲ့အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာအခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲသည်အားနည်းချက်များစွာရှိပြီးကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတများစွာလိုအပ်သော်လည်း၎င်းတို့ကိုကောင်းစွာကြည့်နိုင်သည်။
အခြား linux အသုံးပြုသူများကိုဝေဖန်သူများဖတ်နေရတာကျွန်တော်ပျင်းပါသည်။ အကြောင်းမှာသူတို့သည်စနစ်တစ်ခုကိုသာအသုံးပြုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အတွင်း၌မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်နှင့် blah blah blah ။
ဒီစိတ်ပျက်ဖွယ်အငြင်းအခုံဥပမာအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်သည်။ တာလီဘန်များပင်လျှင်ကားစက်ပြင်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့အား၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ရန်လုံလောက်သည်ကိုသိသည်။ သင်က၎င်းကိုစက်ပြင်သို့ယူဆောင်သွားပြီးသူသည်ကုမ္ပဏီ X မှမူပိုင်ခွင့်ပြုသည်။ ဝက်အူ။
ယခုသင်အသုံးချ / အသုံးချသည့်စက်ပစ္စည်းကိုဘဝတွင်အသုံးချပြီးအငြင်းပွားမှု၏အဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ့မှုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
@Oberost ကျွန်ုပ် Stallman အကြောင်းသင်ပြောသောအရာများကိုမသိခဲ့ပါ၊ သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုကျွန်ုပ်လုံးဝသဘောတူသည်။
သူလုပ်ခဲ့သမျှကိုမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကမှငြင်းပယ်ခြင်းမရှိဘဲအခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲအတွက်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်မှာသေချာသည်။ သည်းခံစိတ်သည် Stallman၊ developer များနှင့် GNU / Linux သုံးစွဲသူများစွာကင်းမဲ့နေခြင်းဖြစ်သည်။
Debian သည် FSF ကို non-free repos များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်နားထောင်ပါကရှေ့သို့ရွေ့မည့်အစားကြီးမားသောခြေလှမ်းနောက်သို့လှမ်းလိမ့်မည်။ လွတ်လပ်မှုမရှိခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက်ဖြစ်သည် - "သင်ဆန္ဒရှိသမျှကိုတပ်ဆင်နိုင်ခြင်း။ "
တစ်စုံတစ် ဦး ကသင့်အားပြောလျှင်၎င်းကိုအခြားနည်းဖြင့်ထည့်သွင်းခြင်း၊ ထည့်သွင်းမထားပါနှင့်၊ ၎င်းသည်သင်၏လွတ်လပ်မှုကိုဆုံးရှုံးစေသည်။ ငါ့ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်၏လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုချန်လှပ်ထားသည်မဟုတ်လော။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Debian - ခင်ဗျားဒါကောင်းနေပြီ၊ ခင်ဗျားမှာလွတ်လပ်တဲ့ system တစ်ခုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာကလွတ်လပ်မှုပိုပေးမယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အကယ်လို့စီးပွားဖြစ် tools တွေကိုသုံးဖို့လိုတယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းရနိုင်ပါတယ်။
ကောင်းသောအရာများစွာကို Stallman မှသင်ယူနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်သူတို့ကိုရွေးရန်သင်ယူရမည်။
ကြည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံအရ (နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ခြွင်းချက်မဟုတ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အခြားယောက်ျားများနှင့်လူများစွာ၏ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုကြည့်ပါ) ၎င်းသည်သူတို့ကအခမဲ့မဟုတ်သော repos ကိုဘေးဖယ်ထားသင့်ကြောင်းအလွန်ကောင်းသည်။ ငါ (ငါထင်) ကအခမဲ့မဟုတ်သောထိန်းသိမ်းခြင်းအရင်းအမြစ်များကိုစားသုံးနှင့် distro ၏အခမဲ့အစိတ်အပိုင်းတိုးတက်စေရန်၎င်းတို့၏အသိပညာကိုရည်စူးနိုင်သူတွေကိုထံမှအလုပ်ကြောင်းထင်ကြေး။ Debian ကိုသူတို့ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကူညီပေးပြီးသူတို့၏ဆော့ဖ်ဝဲကို non-free repos တွင်ထိန်းသိမ်းထားသော soft-libre သည်သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့်ကူညီသည်။ ဒီနေရာမှာအစစ်အမှန်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ရပါမည်။ ငွေကြေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ။
ငါ Debian ထဲကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတခြားယောက်ျားတွေနဲ့ "blogger တွေ" ရဲ့ဗဟုသုတကိုလေးစားဖို့၊ သူကိုယ်တိုင်မသိဘဲဖြစ်သောကြောင့် source.list တွင် contrib နှင့် free ကို load လုပ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ခဏကြာပြီးတဲ့နောက်အတွင်းပိုင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်ငါဟာစနစ်မဟုတ်တဲ့သူမရှိရင်ငါကြိုးစားတာကိုစိတ်ထဲမထားဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ခြင်းကိုဖျက်ဆီးခြင်းထက်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ဆိုင်ရာသဘောတရားနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုဂရုစိုက်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ငါ pc သည် repos များမပါဘဲအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သည်ကိုသဘောပေါက်ခဲ့သည် (၎င်းသည်သူတို့တပ်ဆင်ရာတွင်ကြောက်စရာနီးပါးကိုမေးခွန်းတစ်ခုဖြင့်အသုံးပြုခြင်းကိုအလေးထားသင့်သည်) ။ ကောင်းပြီ, ထို့နောက်ပိုမိုအသိပညာနှင့်စာဖတ်ခြင်းနောက်တော်သို့လိုက်, ဒါပေမယ့်အဲဒီအကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်လောက်ဖြစ်ပျက်ပုံကို။ ဤနေရာတွင်အသုံးပြုသူများစွာသည်မကောင်းကြောင်းနှင့်၎င်းသည်ဆုတ်ယုတ်မှုဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်ကြသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သိလိုသည်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်စီးပွားဖြစ်၏အလေးချိန်မှသင့်ကိုယ်သင်လွတ်မြောက်ရန်ဘယ်သောအခါမျှဆုတ်ယုတ်မှုမဖြစ်နိုင်ပါ။ လွတ်လပ်မှုကိုကြည့်ဖို့ဆိုတာကုန်ကျစရိတ်တောင်မှဘယ်တော့မှအဟန့်အတားမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ဒီမှာရေးထားသလိုသူတို့စိတ်ကူးတွေမှာနွေးထွေးမှုမရှိဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်ဖို့တားဆီးပေးတဲ့သာမန်သာဓကကတည်ရှိနေလို့ပါ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်လူသားဝါဒတို့၏ထင်မြင်ချက်ဖြစ်သောကျွန်ုပ်ထင်သောဤချစ်စရာကောင်းသောအဝေးကိုကူညီရန်ကျွန်ုပ်သည်စာရေးခြင်းထက်အနည်းငယ်ပိုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ လူတွေကိုကြိုဆိုပါတယ်။ တောင်ဘက်မှ, alunado ။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင် "သင်စားရမယ်" ဆိုတာကသူတို့ဟာစီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲအတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာအခြားနည်းလမ်းများမပေးနိုင် သ၍ သူတို့ဖယ်ရှားပစ်လို့မရနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်ကွန်ပျူတာများတွင်နေထိုင်သောကျွန်ုပ်မသုံးနိုင်သောအရာတစ်ခုနှင့်ဘာမှမလုပ်ပါ။
ငါတို့ကအခမဲ့လား၊ အထူးလား။ ငါထင်တာကတော့ဒီဘလော့ဂ်ပေါ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကမှတ်ချက်ပေးခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်ဟာ Windows နဲ့အတူမည်သည့်ကွန်ပျူတာကိုမဆို install လုပ်ပြီး၊ မည်သည့်ပရိုဂရမ်ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေ၊ ။
Stallman ၏တစ်ယူသန်ဆန်သောအစွန်းရောက်ဝါဒသည်လူတစ် ဦး တည်းအတွက်သာလျှင်အကျိုးရှိစေသည်။ ပြီးတော့ Torvalds (နင်ကိုနင်နင်နင်ညင်သာသာနှုတ်ကပါဌ်တော်၏စကားလုံး) ၏ပေါ့ဆသောပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောသဘာဝအရနောက်ဆုံးတစ်ဝက်သာရရှိနိုင်သည့်အကျိုးဆက်များရှိနိုင်သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူတူညီသည်။ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကိုခွင့်ပြုထားသည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည်ဆုံးရှုံးစရာဘာမျှမရှိ၊ မည်သူမျှတာဝန်ခံစရာမလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Stallman နှင့် Torvalds သည်အမြော်အမြင်ရှိသည့်ပရိုဂရမ်မာများဖြစ်သောကြောင့် GNU / Linux အသုံးပြုသူများသည်ထိုစကားလုံးများကိုလက်ခံပြီးသည်းခံရန်လွယ်ကူခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုအံ့အားသင့်စေသည့်အရာမှာလူမှုရေး၊ အတွေးအခေါ်၊ စိတ်ပညာ၊ မနုropဗေဒ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့မွေးလာတဲ့အချိန်မှာ wi-fi သုံးတာကငါတို့ကိုထိန်းချုပ်တဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာနေလို့ပဲ။
လူမှုရေးရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ... မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူတစ် ဦး သည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာတစ်ခုသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါဆေးကုသမှုကိုသူ့ကိုထိန်းချုပ်ထားသောဆေးများပေးခြင်းဖြင့်စတင်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းကိုသူမမှီခိုမှီတိုင်အောင်ဖြည့်စွက်ဆေးများဖြင့်အစားထိုးသည်။ ပိုများသောစကားလုံးများမလိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။
မင်းနမ်းတယ် - *
ငါလုံးဝသဘောတူသည်၊ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကွဲပြားခြားနားသည်၊ ငါတို့ရှိသမျှသည်မတူညီသောလိုအပ်ချက်များရှိသည်၊ Stallman ၏လိုအပ်ချက်များသည် console ထက်ကျော်လွန်သည်မဟုတ်ပါ၊ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ၁၀၀% အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ကိုသုံးနိုင်သည်ဆိုလျှင်လုံးဝမှားယွင်းနေသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကွဲပြားခြားနားကြသည်
@nano အတွက်ကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့သောအခြားအရာတစ်ခုမှာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်၊ လှောင်အိမ်မှအပကျန်အရာများဖြစ်သည်။
ငါတို့အားလုံးနီးပါးမျှဝေကြသည့်သင်၏လက်တွေ့ကျကျထင်မြင်ချက်ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏လက်တွေ့တွင် Linux သည်ကျွန်ုပ်အား "ကွန်ပျူတာတွက်ချက်မှုဆိုင်ရာဗဟုသုတ" ကိုပေးခဲ့သည် (၎င်းသည် source code ကိုနားမလည်နိုင်သော်လည်း) ပြီးတော့အသိပညာကငါတို့ကိုလွတ်လပ်စေသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးသည်။ ထိုအကြောင်းပြချက်နှင့်ရင့်ကျက်သည့်အချိန်တွင်တစ်ယောက်တည်းပြိုလဲသွားသောပြissuesနာများကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် ၀ င်းဒိုးကိုမတပ်ဆင်နိုင်ဟုထင်ပါသည်။ ၎င်းကိုမလုပ်မီ (တရားဝင်ဖြစ်စေ၊ ပုံစံမကျခြင်း) ကျွန်ုပ်သည်ပထမဆုံးသောဝဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဒီဆိုဒ်တွင်အခမဲ့ဖြေရှင်းချက်ကိုမရှာတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ပြန်လှည့်။ မရနိုင်တော့ပါ၊ “ လွတ်လပ်သော (သို့) အထူး” ခံစားမှုနှင့်လုံးဝမပတ်သက်ပါ။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပုဂ္ဂလိကမိုက်မဲမှုနှင့်ကပ်ပါးကောင်များ၏လိုင်စင်များကိုအာဏာအရှိဆုံးသူများသာအသုံးချခြင်းကိုဆက်လက်မပြုလုပ်မိရန်မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်နေသည်။ အပြောင်းအလဲကငါတို့တစ်ယောက်ချင်းစီ၏ဂျပိန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သဲလုံးပေါင်နေပြီး၎င်းသည်တစ် ဦး ချင်းစီဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကသင့်ကိုပိုပျော်ရွှင်စေတယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ရွေးချယ်မှုတို့၏လွတ်လပ်မှုရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စာမတတ်ခြင်း၊ အာဟာရချို့တဲ့မှု၊ ယဉ်ကျေးမှုစသည့်ပြproblemsနာများနှင့်ဆက်စပ်သည့်အခါ ပို၍ အရေးကြီးသည်။ သိပ္ပံပညာ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကပိုကောင်းတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။
“ နောက်ပြန်လှည့်လို့မရဘူး” ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်လို့သင်ကွန်ပျူတာများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူလျှင်၊ သူတို့အလုပ်သို့မဟုတ်အလုပ်ကြောင့်ကုဒ်သင်ယူဖို့အချိန်အလုံအလောက်မရှိကြပေမယ့်အလွန်အရေးကြီးသော၊ အတွေးအခေါ်ပညာကိုသူတို့သင်ယူကြသည်။
Stallman ၏လက်ကိုလှည့်ရန်မပေးခြင်းအားဖြင့်ဤသူ၌ရှိသည့်ဝန်ထုပ်သည်လွတ်လပ်သောအနာဂတ်အတွက်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်ကောင်းစွာနားလည်ပါသည်။ သို့သော်သူ၏အတွေးအခေါ်သည်တစ်ယူသန်ဆန်သောစိတ်ကူးယဉ်ဝါဒနှင့်ရှုပ်ထွေးနိုင်သောကြောင့်ပုံစံသည်ကျွန်ုပ်ကိုမအောင်မြင်ပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာက - ဘာဟာ - ဟာဘယ်လို - ပိုအရေးကြီးတယ် - ဘယ်လိုလုပ်သလဲ - နောက်တစ်နည်းပြောရမယ် ... မနက်ဖြန်ငါတို့နိုးလာပြီးချို့ယွင်းချက်အားလုံးမှအခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲသို့ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတာသတင်းရတယ်။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုမထောက်ပံ့ပါ GNU / Linux ဘာဖြစ်သွားမလဲ။
OUYA သည်တစ်စုံတစ် ဦး က OUYA ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တစ်ခု၊ Firmware နှင့် PUBLIC drivers များပါသောအခြားအခမဲ့ FREE များနှင့် ARM ကွန်ပျူတာ၏ပရောဂျက်တစ်ခုနှင့်တူသည်မဟုတ်ပါကလမ်းကိုပြသခဲ့ပြီး၊ အများစုမှာ ARM တွင်ဖြစ်သည်။ သင်ပင် Linaro သို့မဟုတ် Replicant ကိုတပ်ဆင်။ မရပါ။
ငါမျှဝေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရှိတယ်၊ ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တစ်ခုအနေနဲ့ USB flash drive လေးခုထားရန်နှင့် USB မှ ၄ င်းတို့အတွက်မြည်းစမ်းရန် GNU / linux distros များ၊ android, tizen, meego သို့မဟုတ် FF OS များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်၊ စျေးပေါဖြစ်နှင့်၎င်းတို့၏စွမ်းရည်ကိုတိုးချဲ့နိုင်ဖြစ်ခြင်းအပြင်။
PS: ကျွန်ုပ်အတွက် SABAYON သည်အကောင်းဆုံးသောအနှောက်အယှက်ဖြစ်သော်လည်း ARCH ထက် ပို၍ နည်းပါးပါသည်။ ၎င်း၏ 1000 Hz kernel သည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ တစ်ခုခုပျောက်ဆုံးနေပါက developer များကအမြဲတမ်းပညာရှိကြပြီး၊ PPA: သင်မေးလိမ့်မယ်၊ အဲဒီအချိန်မှာ - ငါဘာကြောင့်လဲဆိုတာငါမသိဘူး - များစွာသော packets များသည် debian ၏ပစ္စည်းများနှင့်မတိုက်ဆိုင်ပါက“ ထူးဆန်းသောအရာများ” ကိုစတင်စုစည်းသောအခါသင်၌မှီခိုမှုနှင့်အတူ“ အလုပ်အနည်းငယ်သာ” ရှိသည်။ ။ သင်၏ XFCE ပျံသည်။
FSF စာရင်းနှင့်နာမည်ကျော်သော distro ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောစိတ်ကူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ gnu.org စာမျက်နှာတွင်အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဆိုလိုသည်၊ Hardware ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ Dell ကိုသင်ကြိုးစားခဲ့ဖူးသလား။
Hmm ငါဘယ်သူ့ကိုလိုက်ရှာနေတာလဲ။ ဒါကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်း (နောက်နေတာမျိုး) ရဲ့ပြ(နာဖြစ်ရမယ်။
ဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်၍ stallman ၏အတွေးများသည်မှန်ကန်သည်ဟုအချို့ထင်မြင်ယူဆကြသည်။ အချို့ (fsf) ကသူတို့ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးစေလို။ ၊ အကယ်၍ သင်သာပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုသင်မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ အဲဒါကိုလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူး၊ ဥပမာကိုကြည့်ပါ။ vit ကွန်ပျူတာကနေစာရေးတယ်။ အိမ်မှာငါ့ညီတစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ရှိတယ်၊ ငါ့ဇနီးကနောက်တစ်ယောက်၊ ငါ့သုံးဖို့ ၀ ယ်ဖို့ငါအလုပ်လုပ်တယ်။ သူတို့မှာ win (ကအစ်ကိုနဲ့ကျွန်တော့်ဇနီးသူ linux ကိုစိတ်ရှည်သည်းမခံသောကြောင့် - b)၊ သူတို့မှာ win7နဲ့ ubuntu (မကြာခင်ကပဲ lol ကိုပြောင်းလဲ) ။ ငါကြိုက်တယ်၊ သူ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအားလုံးလုံးဝလွတ်လပ်မှုရှိခဲ့ရင်ငါကြိုက်နေတုန်းပဲ၊ ငါ့မိသားစုကအဲဒါကိုမသုံးကြဘူး။ ဒါပေမယ့်သူရဲ့အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကဖြစ်ပျက်နေတာတွေက intel တွေပါ။ အခမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမ ၀ ယ်နိုင်ရင် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအခမဲ့ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ကြည့်ပါ၊ ကျွန်တော် stallman's လို laptop တစ်လုံးဘယ်လို ၀ ယ်ရမလဲဆိုတာရှာချင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတရုတ်ကိုကူးဖို့လိုလိမ့်မယ်။ နိဂုံးချုပ်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး Stallman ကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်လမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားခြင်းသည်ကောင်းမွန်ပြီး FSF သည်၎င်းကိုခရီးသွားသည်ကိုစောင့်ကြည့်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တည်းကျဆုံးခြင်းဖြင့်မလုပ်ဆောင်နိူင်ပါ။ မဖြစ်နိုင်ပါ၊ လူကြီးလူကောင်းများ၊ ပိုမြန်လေပိုကောင်းပေမဲ့ရုတ်တရက်လုပ်တာကကျရှုံးမှုဆီသို့ ဦး တည်လိမ့်မယ်။
သူတို့လုပ်သင့်သလား ကောင်းပြီ၊ သူတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူယူပြီး debian အဖြစ်ဆက်လုပ်သင့်တယ်။ ကန်ဘောတွေနဲ့မလုပ်ချင်ဘူး၊ Ubuntu မှာကြည့်ကြည့်။ (ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါကပါတီတစ်ခုမှဖြစ်တာငါသိပြီးဖြစ်ပေမယ့်သူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့သတင်းတွေဘယ်လိုအဆုံးသတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းသိတယ်၊ ငါနင့်ကိုကန်တယ်။ ) မင်းက ၁၀၀% အခမဲ့ဖြစ်ချင်လား။ ကောင်းပြီ၊ ဒါပေမယ့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာငါတို့အသင်းများကိုမွေးဖွားလာတဲ့သုံးစွဲသူများကိုအပြန်အလှန်အားဖြင့်ငါတို့ကိုအစားထိုးပေးတယ်၊ ကိစ္စတော်တော်များများမှာပရိုဂရမ်ကိုဘယ်လိုလေ့လာရမှန်းမသိဘူး (Linux မှသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအကြိမ်ကြိမ်ကယ်တင်သော်လည်း )) ။
ငါအခမဲ့ nouveau ယာဉ်မောင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ငါ၌အရှိန်ရှိသည်။ ငါပြproblemsနာမရှိဘဲ nexuiz ကစားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ debian ၁၀၀% အခမဲ့ရှိသည်။
ပြီးတော့ FSF စာရင်းကတော့စာရင်းတစ်ခုဖြစ်လို့ပါ။ အဲဒါကိုနိုင်ငံရေးသမားလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ အကယ်လို့သင်ဟာအခမဲ့ debian ကိုအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်၊ သုံးပါ၊
စာရင်းထဲတွင်မပါဝင်သည်ဖြစ်စေ Debianists ကို၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသြဇာလွှမ်းမိုးပါသလား။
v3on မင်းအရမ်းကြင်နာပေမယ့် ... ငါမလိုချင်ဘူး
ကောင်းပြီ၊ တစ်ခါတုန်းက Wi-Fi မရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်စာချုပ်မရခဲ့၊ အလွန်ကောင်းသောစာချုပ်၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအရကျွန်ုပ်၏ ၀ ိုင်အတွက်မှန်ကန်သောယာဉ်မောင်းများနှင့်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့လျှင် FSF သည်အစွန်းရောက်များဖြစ်သည်။ အလုပ်လုပ်ရန် Fi ... ငိုတော့ဘူး။
ဒီဟာကတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဖြစ်ရမယ်၊ သဘာဝပဲ။ ပထမဆုံးသင်တွားသွားမယ်၊ ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးပြေးလိုက်မယ်။
သို့သော် 64 bit firmware ကိုမထွန်းကားသေးသောကြောင့်ဂရပ်ဖစ်ကကားမောင်းသူများသို့၎င်း၊ partitioning task များနှင့် boot loader တို့သည်၎င်း၏တာ ၀ န်များဖြစ်သည်။
စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲကို GNU ဖြန့်ဝေမှုတစ်ခုတွင်နေရာချနိုင်သလားဟုသင်မေးလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Dyne ကိုစိတ်ဝင်စားသည်။ bolic …သို့သော် flash, Adobe ကို pdf စာဖတ်သူအနေဖြင့်ထည့်နိုင်ပါသလား။
ကောင်းပြီ၊ ငါ windows xp မှထွက်ပြီး linux သို့ပြောင်းချင်သည်။ Dyne: bolic အလွန်အစွန်းရောက်လျှင် OpenSuse (သို့) Chakra ကို install လုပ်၍ Dyne: bolic ကိုနှစ်သက်သောဆော့ဖ်ဝဲအားလုံးကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အချိန်မယူပါ။ linux ကိုသိပေမယ့်ဘယ်သူ့ကိုမှမမှားဘဲကြော့ရှင်းစွာထွက်သွားနိုင်မှာပါ။